10 Izinsuku uhambo in eBavaria eJalimane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izinsuku uhambo in eBavaria eJalimane
(Kugcine ukubuyekezwa On: 21/02/2020)
Uma nje waqala uhlela uhambo ngokusebenzisa Bavaria eJalimane, cishe uyazibuza mayelana uhambo. Wena cishe ugajwe inani nje lilodwa lezimemezelo emangalisayo izindawo ukuvakashela. plus, ufuna uvumelane nabo bonke 10 izinsuku uhambo eBavaria.
Bavaria kuningi sipho, nokuthi ukuphi ezithile. Ungavakashela isibalo esikhulu emadolobheni magnificent Bavaria, efana Munich, Ngokwesibonelo. Ungaphinde uye kwi okukhulu Bavarian ubhiya umzila uma connoisseur likabhiya.
Sizokwenza ukukunika uhambo eziningiliziwe Bavaria, futhi zonke uzodinga ukwenze ukulandela futhi ube nesikhathi esimnandi! Ngakho, ake sibheke.
Isithuthi somzila Ingabe Kunayo Uyezwana Nemvelo Way Izikhangibavakashi. This sihloko eyabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
Yini odinga ukuyazi Ngaphambi Thina Qalisa Nge Zethu 10 Day uhambo in eBavaria?
Ngaphambi kokuthi uqale, kukhona izinto ezimbalwa kudingeka ukuba nazi.
Bavaria kuyinto sifundazwe enkulu, futhi ungakwazi kalula bachithe amasonto kuwo. Kuyinto cishe ezidingekayo uma ufuna ukubona konke ngokuningiliziwe enkulu.
Nokho, uma uya 10 uhambo day, ke kuyomelwe uthathe amanye izinto. Ngaphezu kwalokho, kungaba kuhle kakhulu ukuya nge isitimela. Uma ukwenza lokho, uzokwazi ukuthola yonke indawo Ngokuphazima kweso. On top of ukuthi, kuzodingeka ithuba sibone ukubukwa enkulu Bavaria izipesheli.
Ngaphezu kwalokho, uya ngesitimela ngokusebenzisa Bavaria Kulula kakhulu futhi engabizi. Amathikithi ezishibhile, futhi ungavakashela wonke amagumbi isifundazwe.
Ekupheleni, odinga ukukwazi uma ukuvakashela Bavaria. Izikhathi zakho 10 izinsuku uhambo eBavaria kufanele amboze kuthiwa kuphi kusukela ngo-September kuya ku-October. Uyoba agweme izixuku, futhi uzophinde uthole ithuba ukuvakashelwa Oktoberfest.
Manje njengoba konke lokho imbozwe, ake sibheke uhambo lwakho:
Bavaria uhambo Day 1 futhi 2: Munich
Lapho uya Bavaria, kufanele uqale nge Munich. Okokuqala nje, kulula ukufinyelela, kungekho onendaba lapho ukhona eYurophu. Ungakwazi sithathe isitimela kusukela cishe noma kuphi futhi ufinyelele Munich. noma, uma ivela endaweni ethile kude, ungakwazi ukundiza. Munich lingumuzi enkulu eBavaria, futhi izindiza ndizela ke kusukela emadolobheni amaningi emhlabeni wonke. Uma kungenjalo ukuthi, ungakwazi kalula ukufinyelela ke ngokushayela indiza kwelinye idolobha ezinkulu bese uya Munich.
plus, masingakhohlwa ukuthi iyiphi 10 izinsuku uhambo eBavaria akukwazi ephelele ngaphandle Munich. Akungabazeki ukuthi ukuthola kulumuzi imilingo indawo ukuvakashelwa. Kusukela emangalisa iwashi umbhoshongo kuya Englisher Garten, kuzodingeka izindawo eziningi ukuvakashelwa.
Uma ufuna ukubona okuningi ngakho ngangokunokwenzeka, thina elikweluleka ukuhlala phakathi nendawo. Ngaleyondlela, uzokwazi ukuthola yonke into ngezinyawo.
Lwathi luphela usuku 2, kumele izikhwama zakho futhi ukuya edolobheni Berchtesgaden.
3 futhi 4: Berchtesgaden And azungezile National Park
Berchtesgaden Itholakala South East of eBavaria. Kuyinto ephaketheni elincane ezweni eliseduze komngcele Austria. Uzothola enhle kunazo esiqiwini eJalimane kule ndawo. plus, uzophinde uthole ukuchitha isikhathi esithile kuleli dolobha imilingo Berchtesgaden.
Ekupheleni, kuzodingeka ukuba uvakashele Lake Konigsee kanye Eagles Nest. Lake Konigsee kuyinto echibini eliphakeme eJalimane futhi uzungezwe izintaba ezinhle kakhulu. Ngokuqondene Eagles Nest, zonke buffs umlando ukubavakashela ke, njengoba kwakunjalo okuthunyelwe umyalo amaNazi.
Uma ufuna uhlanganise izinto, ungase futhi iya ku Salzburg. Umuzi eduze komngcele kanye Berchtesgaden, futhi kuba ngokulinganayo omlingo Salzburg!
Ungabese uqede usuku lwakho enhle kangaka obubanjelwe Berchtesgaden. Ngemva kokuchitha ubusuku, ungakwazi udlulele uya khona eduze ngosuku 5.
Salzburg ukuze Berchtesgaden
Munich ukuze Berchtesgaden
Linz ukuze Berchtesgaden
Innsbruck ukuze Berchtesgaden
Bavaria uhambo Izinsuku 5, 6, futhi 7: Garmisch Partenkirchen, Zugspitze, Futhi Neuschwanstein Castle
Isinyathelo esilandelayo ku yakho 10 izinsuku uhambo eBavaria kuhlanganisa ezinye kakhulu izindawo olunothile eJalimane. Uma usuku 5 siqala, kumele hop isitimela Garmisch Partenkirchen.
Nakhu ungathola kule ndawo:
Usuku 5: Hlalani phansi futhi uvakashele ingxenye eyinhloko edolobheni.
Usuku 6: Yiya imilingo Neuschwanstein Castle. Uyazi-ke njengoba omunye izinqaba kakhulu yisakhiwo sodumo emhlabeni. Kuyinto eyiqiniso Fairytale nqaba futhi lowo waphefumulela castle Disney.
Usuku 7: Vakashela isiqongo Zugspitze, okuyinto impela ekubeni edolobheni. Lapha ungathola omunye ukubuka okungcono kakhulu Alps. Abanye abantu sihambe, kodwa thina ukweluleka ukuthi uthathe imoto ikhebula.
Lokhu kuyoba ingxenye ende kunazo uhambo lwakho futhi esibalulekile ukuze ukuqalisa. ngosuku 8, ungakwazi udlulela Rothenburg.
Ulm ukuze Fussen Izitimela
Munich ukuze Fussen Izitimela
Stuttgart ukuze Fussen Izitimela
ENuremberg ukuze Fussen Izitimela
8: Rothenburg uhambo in eBavaria
Usuku 8 kugcinelwe a eside ngesitimela ngangokuba kwakhamuluka umuzi egqamile Rothenburg ob der Tauber. Awunayo ukuba ukukhathazeka ukuthi ukugibela lide, uyoba nesikhathi esiningi ukuvakashela leli idolobha. Kuyinto encane kakhulu, futhi ungabona khona kwelinye ntambama.
Lwathi luphela usuku, ungakwazi adle phezu Schneeballen. Uma ufuna, ungahlala ebusuku, noma ungakwazi udlulele uya khona eduze: ENuremberg noma Würzburg.
Bavaria uhambo Izinsuku 9 futhi 10: ENuremberg Noma Würzburg
ENuremberg ngumuzi wesibili omkhulu esifundazweni Bavaria. Kuba yisikhathi futhi lapho kufanele uvakashele indawo yakho 10 izinsuku uhambo eBavaria. Nokho, uma ufuna, ungahlala yokuyivula ukuba Würzburg. Womabili la madolobha okulula eduze komunye nomunye futhi Rothenburg, ngakho engxenyeni travel kuyoba lula.
Womabili la madolobha kukhona umlingo ezigcwele umlando Medieval nezigodlo. Ngakho, ngempela kukuwe ukunquma ukuthi iyiphi enye kuyinto mnandi.
Njengoba kuzodingeka izinsuku cishe emibili egcwele, ungase ube ngisho akwazi vakashela kokubili.
Ngakho, ukhona lapho-ke. yakho 10 izinsuku uhambo eBavaria, Germany. Senza isiqiniseko ukufaka zonke stop kubalulekile kule ndawo ezinhle kakhulu-Europe. Siphinde yayihlanganisa nendlela ukufinyelela bonke babo ngesitimela ngempela ukuzwa yonke magic it has sipho.
Uma ufuna ukwazi kabanzi mayelana uhambo in eBavaria, ukhululeke contact Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “A 10 Day uhambo in eBavaria eJalimane” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Bavaria europeantravel europetravel i-eurotrip trainjourney Tranride travelgermany traveltips
5 Izindawo Iningi Engaqondakali EYurophu
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe